Ziziphi iimpawu abanazo isibini esingonwabanga? Bezzia
Ziziphi iimpawu abanazo isibini esingonwabanga?
UMaria Jose Roldan | 10/05/2022 22:12 | Ubudlelwane
Kukho uluhlu lwamaxabiso olungenakusilela kulo naluphi na ubudlelwane: uthando, intlonipho okanye ukuthemba. Zonke ezi xabiso ziya kunceda isibini ukuba sonwabe kwaye siqhubeke ixesha elide. Ngokuchasene noko, ukungonwabi kobudlelwane kubangelwa ubukhulu becala ubunzima isibini esinaso xa kufikwa kukuhlala kunye kunye nokungabikho kwezinye zezinto ezixabisekileyo ezibonwe ngasentla.
Ngelishwa namhlanje, kukho izibini ezininzi ezingonwabanga kwaye abakonwabeli iqhina elidaliweyo. Kwinqaku elilandelayo sikubonisa iimpawu ukuba ubudlelwane obungonwabanga buhlala bunazo kunye nento omawuyenze ukunqanda le meko.
Iimpawu zobudlelwane obungonwabanga
Kukho inani leempawu ezinceda ukuchonga ubudlelwane obungonwabanga:
Lubudlelwane apho inqanaba lemfuno yamaqela omabini liphezulu kakhulu. Ngamnye ulindele ukuba omnye enze ngokwemigaqo yakhe ngamaxesha onke, ngaphandle kokuthathela ingqalelo uluvo lweso sibini. Konke oku kubangela iingxoxo kunye neengxabano ezingazuzi nto kwikamva elihle lesi sibini.
Isiphumo semfuno kukunyamezelana okukhoyo phakathi kwesibini. Iimpazamo ezithile ezikhokelela kumlo phakathi kwamaqela azivumelekanga. Ukunyamezelana okuncinci kubangela izithuko kunye nokungafaneleki ukuba kube yinto yemihla ngemihla kunye nokungonwabi kufakwe ngokupheleleyo kubudlelwane.
Ukusetyenziswa kwetyala ukuthethelela imeko yengqondo yinto ebonakalisa uninzi lwezibini ezingonwabanga. Iqabane alinakubekwa tyala ngalo lonke ixesha ngempilo kabani ngokweemvakalelo. Konke oku kuya kuzisa iingxaki ezininzi kubudlelwane kunye ukuba ukuphilisana kuba nzima ngokwenene kuzo zonke iinkalo.
Isibini esingonwabanga asiloqela kwaye ayikwazi ukusombulula iingxaki ezahlukeneyo ngendlela edibeneyo. Kubudlelwane obonwabileyo, izinto zenziwa kwaye zicwangciswe ngendlela efanelekileyo, kuthathelwa ingqalelo uluvo lomntu ngamnye. Amaqela amabini makagwele kwicala elinye kwaye axhasane ngokudibeneyo.
Ngobudlelwane obungonwabanga, amaqela aphikisana malunga nayo yonke into kwaye abone ukuba yeyiphi ibini echanekileyo. Oku akunakuvunyelwa phantsi kwazo naziphi na iimeko kwaye kuyacetyiswa ukuba uveze ingxaki echaphazelekayo ukuze kufumaneke esona sisombululo sifanelekileyo. Akuncedi nganto ukuba nomsindo okanye uqale ingxabano neqabane lakho, kuba oku kuya kwenza izinto zibe mbi ngakumbi.
Ngamafutshane, Akulula ukufumana isibini esithile sonwabile ngamaxesha onke. Ukuhlala neqabane lakho kwenza izinto zibe nzima kwaye iingxaki zinokuvela rhoqo. Akucetyiswa ukugcina ubudlelwane obungonwabanga ixesha elininzi kuba iyinto engabancediyo naliphi na iqela. Ulonwabo yinto efanele ibekho kuso nasiphi na isibini esigqalwa sisempilweni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Psychology kunye nesibini » Ubudlelwane » Ziziphi iimpawu abanazo isibini esingonwabanga?
Ukutya okutyebileyo nge-ayoni kukutya komntwana
Imingcipheko yempilo yeeswiti ezenziweyo